Galaxy Z Fold 3 wuxuu noqon karaa Samsung kii ugu horreeyay oo leh kamarad shaashadda ka hooseysa | Androidsis
Galaxy Z Fold 3 wuxuu noqon karaa Samsung kii ugu horreeyay oo leh kamarad aan la soo bandhigi karin
Markii qiyaastii 3 sano ka hor, taleefannada casriga ahi bilaabeen inay yareeyaan shaashadda shaashadda illaa ugu badnaan, in badan oo naga mid ah ayaa isweydiinnay goormay suurtagal noqonaysaa ka saar shey kasta qalabka hore iyada oo aan la adeegsan farsamooyin lagu qariyo, taasi waa, kamaraddu waxay si toos ah uga hooseysaa shaashadda.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaan aragnay horumar badan oo arintan laxiriira soosaarayaasha kaladuwan, laakiin ilaa iyo hada ZTE kaliya ayaa bilaabay nooc, ah Axon 20 5G con kamaradda qarsoon ee shaashadda hoosteeda, terminaal looga dhawaaqay Shiinaha bishii Sebtember. Xiaomi ayaa la filayaa inay bilowdo terminal kamarad ka hooseysa shaashadda bilowga sanadka.
Haddii aan ka hadalno Samsung, wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira suurtagalnimada in lagu soo daro kamaradda shaashadda hoosteeda, tilmaam Galaxy Z Fold 3, oo ah terminal sannadkan wax badan isbeddelay marka loo eego jiilkii ugu horreeyay oo aan shaki ku jirin tixgeli smarifonka sanadka.
Sida laga soo xigtay ETNews, Samsung waxay bilowday inay soo saarto tikniyoolajiyadda lagama maarmaanka u ah ku dar kamaradda hore shaashadda Galaxy Z Fold 3. Waa in la xusuusnaadaa in tiknoolajiyada shaashadu ka duwan tahay waxa aan ka heli karno boosteejooyinka kale, boosteejooyinka ay ku daboolan yihiin lakabka aan is-bedbeddeli karin.
Intaa waxaa dheer, wuxuu ka shaqeynayaa inuu soo saaro algorithm kaas oo daryeela toos u sax sawirada la qabtay, sawiro aan codsaneyn shaandhada saxda ah ay muujinayaan sawir qaloocan oo xaqiiqda ah markii laga helo hoosta guddiga.
Waqtigan xaadirka ah warbaahintani ma sheeganayso in jiilka soo socda ee Galaxy S21 kala duwanaan doono kamaradda shaashadda hoosteeda, laakiin haddii aan tixgelinno in fikradda Samsung ay tahay inay soo bandhigto bisha Janaayo, ma jiro waqti wax ah . Si kastaba ha noqotee, haa Xusuusin 21 si loogu daro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Galaxy Z Fold 3 wuxuu noqon karaa Samsung kii ugu horreeyay oo leh kamarad aan la soo bandhigi karin
Samsung Galaxy A70 wuxuu bilaabaa helitaanka One 2.5